SB-251 Ruqsadaha Darawalnimada - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > our Work > SB-251 Ruqsadaha Darawalnimada
8 Xafiisyo Cusub Ayaa Loo Furay Shatiyo Loogu Talogalay Dadka Aan Sharci Lahayn Coloradan: Ballantaada Qabso Maanta!
La dhajiyay: Abriil 8, 2022
Hadda way fududahay waligaa in aad codsato shatiga darawalnimada ama aqoonsiga Colorado haddii aanad sharci lahayn!
Sidaan ku nimid
Guulaha la xidhiidha
Sharciga Wadada Colorado iyo Badbaadada Bulshada (CO-RCSA), oo sidoo kale loo yaqaan SB-251, waxay siisaa ruqsad wadayaal dhammaan dadka deggan Colorado, iyadoon loo eegin heerka socdaalka. 19-ka xafiis ee DMV ee gacanta ku haya barnaamijka SB-251 waxay siisay dukumiintiyo kudhowaad 150,000 Coloradans ilaa sanadka 2020. Si balan loo sameeyo, wac 303-205-2335 ama booqo shabakada DMV.
Ruqsaddaydu miyay ka duwanaan doontaa shatiyadaha kale ee SB-251?
Dhinaca hore, si looga sooco liisanka Aqoonsiga Aqoonsiga dhabta ah, liisankaagu wuxuu oran doonaa, "Uma ansaxayso aqoonsiga federaalka, u codeynta ama ujeedooyinka faa'iidooyinka dadweynaha." Fiiro gaar ah: maahan oo keliya soogalootiga aan sharciga lahayn ee shatiga ku qaata farriintan. Soo-galootiga leh joogitaanka ku-meelgaarka ah ee sharciga ah, sida DACA iyo TPS, sidoo kale waxay helaan laysanka SB251 oo isku mid ah.
Sideen u isticmaali karaa liisankayga?
Waxaad isticmaali kartaa liisankaaga SB-251 si aad u kaxayso oo aad isu sheegto saraakiisha boliiska, tusaale ahaan joogsiga taraafikada iyo aqoonsiga dawladu bixisay. Kuma dhigayso inaad u qalanto wax dheefo dadweyne oo aanad u qalmin ka hor intaanad qaadan liisanka darawalnimada, kumana ogolanayso inaad shaqeyso ama kuma siiso xaqa codbixinta. Laga bilaabo May, 2023, qof kastaa wuxuu u baahan doonaa aqoonsiga dhabta ah si uu u duulo. Laga bilaabo markaa, "liisan calaamadeysan" lagama aqbali doono garoomada diyaaradaha. Taa beddelkeeda, dadku waa inay isticmaalaan baasaboor waddankooda ama ruqsadda shaqada.
Ka waran haddii aan haysto tikidhada taraafikada ee aanan bixin?
Fadlan daryeelo iyaga kahor intaadan dalban shatiga SB-251. Waad awoodaa ka hubi diiwaankaaga wadista DMV kasta oo leh aqoonsi sawir ama codso diiwaankaaga internetka halkan haddii horey laguu siiyay ruqsada Colorado. Ama, haddii aad ka timid Mexico, la xiriir Qunsuliyadda Mexico si ay kaaga caawiso nadiifinta tigidhada taraafikada.
Kawaran hadaan haysto tarxiil hore, taariikh dembi, ama taariikh adeegsi dukumenti been abuur ah?
Waxaan kugula talineynaa inaad la tashato qareen ka hor intaadan dalban rukhsad. ICE waxay marin u heli kartaa macluumaadka DMV markay laxiriirto dambi baaris firfircoon ama dambi suurtagal ah oo socda. Booqo InformatedImmigrant.comWixii macluumaad dheeraad ah.
Ilaa iyo 1998, soogalootiga oo dhami waxay heli jireen laysanka darawalnimada ee Colorado, iyadoon loo eegin xaaladooda socdaal. Markii sharciga iyo siyaasadda la beddelay si looga horjoogsado Coloradans-ka aan sharciyeysnayn inay helaan rukhsad, inbadan waxay ku qasbanaadeen inay baabuur wadaan iyagoo aan mid haysan. Tani waxay horseed u tahay tikidhada, qabashada gawaarida, qabqabashada, iyo kumanaan masaafurin ah. Kadib, 2001, koox muhaajiriin aan sharciyeysnayn ayaa abaabulay inay u dagaallamaan shatiyada darawalnimada ee beeshooda. Sannadkii 2013, ugu dambayntii way ku guulaysteen, oo SB-251 ayaa dhaqan galay! Tan iyo waagaas, waxaan ka shaqeynay inaan marino shan biilal oo dheeri ah taasoo ka dhigeysa barnaamijka mid waxtar badan oo dadka oo dhan wada gaari kara.
Marba marka ka sii dambeysa gobolada ayaa aqoonsanaya in waddooyinkeenna iyo bulshooyinkeennuba ay ammaan yihiin marka qof kastaa helo rukhsadda darawalnimada. Marka lagu daro Colorado, California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Utah, Vermont, Washington, iyo Washington, DC dhammaantood waxay u oggolaanayaan muhaajiriinta aan sharciyeysnayn inay helaan rukhsad.
Tan iyo markii laga gudbay SB251, waxaan u doodnay oo si guul leh u gudbinay shan biilal oo dheeri ah si barnaamijka looga dhigo mid caddaalad ah, ka waxtar badan, oo laga wada heli karo dhammaan:
SB18-108: Warka maanta Biilkani wuxuu qofka u oggolaanayaa inuu isticmaalo kaarka sooshal sekuuritika beddelka kaarka aqoonsiga canshuur bixiyaha (ITIN). Waxay sidoo kale u furaysaa ikhtiyaarka cusboonaysiinta khadka tooska ah ee shatiyada darawalnimada SB251. Intaas waxaa sii dheer, qofka shatigiisa lumo ama la xado wuxuu heli karaa bedelkiisa isagoon cusbooneysiin shatiga. Waxaa kafaala qaaday Sen. Crowder, Sen. Coram, Rep. Arndt, iyo Rep. Singer.
HB16-1335: Sharcigan ayaa sharci darro ka dhigaya in la iibiyo ballamaha iyo adeegyada bulshada, oo ay ku jiraan ballamaha SB-251. Hadafkeedu waa in la joojiyo iibinta suuqa madow ee ballamaha SB-251, sidaa darteed ballamo badan ayaa loo heli karaa dadka isticmaalaya nidaamka bilaashka ah ee lagu aasaasay DMV. Waxaa kafaala qaaday Rep. Pabon.
HB16-1415: Sharcigan ayaa u oggolaanaya dhammaan codsadayaasha SB-251 ee ku dhaca imtixaankooda wadista inay aadaan qeybta baaritaanka gaarka ah ee xisbiga 3aad oo ay ku noqdaan xafiis kasta oo SB-251 DMV ah muddo 60 maalmood gudahood ah si ay u helaan liisankooda iyagoon jadwal cusub u ballamin. Waxaa kafaala qaaday Rep. Pabon.
HB16-1274: Sharcigan ayaa ka takhalusay qoraalka hoose ee SB-251 taas oo yareyn lahayd tirada xafiisyada DMV ee bixiya adeegyada SB-251 ka dib markii tiro liisanno ah la siiyay. Sharcigan ayaa u oggolaanaya barnaamijka inuu socdo waqti aan la cayimin. Waxaa kafaala qaaday Rep. Singer iyo Sen. Ulibarri.
SB19-139: Hindise sharciyeedkan ayaa laga furay toddobo xafiis oo cusub guud ahaan gobolka oo ka shaqeeya shatiyada SB-251. Xafiis ayaa laga furay Glenwood Springs, Montrose, Durango, Lamar, Pueblo, Alamosa, iyo Ft Morgan. Waxaa kafaala qaaday Sen. Coram, Sen. Moreno, iyo Rep. Singer.
Colorado DMV waxay balaadhisaa tirada xafiisyada bixiya balamaha, adeegyada SB-251 shatiga darawalnimada, aqoonsiga
Balaadhintu Waxay Siisay Helitaanka Dheeraad Ah Adeegyada DMV ee Coloradans Iyadoon loo eegin Xaaladda Socdaalka Denver, CO — Isbahaysiga Xuquuqda Soogalootiga Colorado iyo I-Drive Coalition waxay bogaadiyeen go'aankii dhawaa ee Waaxda Gaadiidka (DMV) ee lagu ballaariyay tirada xafiisyada DMV ee bixiya ballamaha bulshada soo galootiga ah si ay u codsadaan liisanka darawalnimada, […]
Red Rocks Amphitheater wuxuu joojiyaa Amazon Palm Scaning Tech
Wararka WWC Bishii Nofembar, in ka badan 200 oo fanaaniin ah - oo ay ka mid yihiin Tom Morello iyo Kathleen Hanna - ayaa saxeexay warqad furan oo ka dhan ah isticmaalka timirta ku shaqaynaysa ee Amazon ee xarunta caanka ah ee Red Rocks Amphitheater. Ka dib walaacyada gaarka ah ee ololeeyayaasha, goobta ayaa hadda joojisay isticmaalka adeegga. Wakiil ayaa u sheegay dagaalka mustaqbalka, […]
Hindise Sharciyeed Cusub oo Lagu Badbaadinayo Barnaamijka Shatiga Wadista Darawalnimada CO
Hindise Sharciyeed Cusub oo Loogu Talagalay Badbaadinta Barnaamijka Shatiga Wadista Darawalnimada CO Sharciga cusub ee gobolka ee ujeedkiisu yahay xoojinta iyo hagaajinta barnaamijka Shatiga Wadista SB 251 ee Colorado ayaa maanta lagu soo bandhigi doonaa Golaha. (Anyaberkut / iStockphoto) Febraayo 3, 2016 DENVER - Wakiilka Gobolka Jonathan Singer, D-Longmont, wuxuu qorsheynayaa inuu maanta horgeeyo sharci golaha dhexdiisa oo loogu tala galay in lagu jabiyo […]
Ballan samee si aad u hesho SB-251 Shatiga Wadista
Waa kuwee Xafiisyada DMV ee Bixin kara SB-251 Shatiyada Wadista?
Bogga Colorado DMV ee SB-251 Ruqsadaha Darawalnimada
Soo-galootiga Xog-ogaalka ah: SB-251 Tilmaamaha Shatiga Darawalnimada
3 Talaabo oo Aad Ku Hesho Shatigaaga SB251 Liisanka Wadista ee Colorado